Burcad badeeda Somalida oo 24 saac gudahood ku qabsadey markabkii…(SAWIRO) – SBC
Burcad badeeda Somalida oo 24 saac gudahood ku qabsadey markabkii…(SAWIRO)
Kooxaha shufto badeeda Soomaalida ayaa markabkii labaad mudo 24 saac gudahood waxay ka qabsadeen xeebaha badweynta Hindiya, iyadoo wasaarada arimaha dibada Kuuriyda Koonfureed ay shaacisay in markab laga leeyahay dalkaasi ay qabsadeen burcad badeeda. Sarkaal ka tirsan wasaarada arimaha dibada Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Cho Byung Jae ayaa sheegay in markab lagu magacaabo Hanjin Tianjin oo ah nooca kunteenarada xambaara oo ay saaran yihiin 20 shaqaale ah uu gacanta u galay saaka kooxaha Jiri badeeda Soomaalida.
Wakaalada wararka Kuuriyaanka ee Yonhap News Agency ayaa soo tabisay in markabka xiligii la afduubayey uu gooshayey masaafo u jirta 850 KM xeebaha Soomaaliya, taasi oo muujinaysa in badda caalamiga ah laga qabsadey.
Markabkan waxaa iska leh shirkada Hanjin Shipping Co ee Kuuriya Koonfureed laga leeyahay waxaase uu ka diiwan gashay yahay wadanka Panama, iyadoo xamuulka uu qaadi karo lagu sheegay 75 kun oo tan. Shaqalaha saaran markabka ayaa 14 ka mid ah waxay u dhasheen wadanka Kuuriyada Koonfureed halka lixna ay u dhalatey dalka Indonesiana, waxaana wasaarada arimaha dibada ee dalkaasi ay shaacisay in markab dagaal uu ku sii jeedo aaga laga qafaashay markabkan, lamase sheegin wax hawlgal ah oo ay qorsheynayso dawlada Kuuriya oo la xiriira soo badbaadinta markabkan.
Afduubka markabkan ayaa ku soo aadayaa iyadoo saaka waaberigii kooxaha shufto badeedu ay qafaasheen markab kale oo ah nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Todobaadkii hore ayaa burcad badeeda Soomaalida waxay ka qaateen lacag 3.5 milyan oo doolar ah markab laga leeyahay wadanka Panama, taasi oo qayb ka ah lacago malaayiin doolar gaaraysa oo ay ka helaan falalka afduubka maraakiibta oo ay ka wadaan xeebaha Sooomaaliya & biyo badeedka caalamiga ah ee kulaala.